မြန်မာအကျဉ်းသား ၅၉ ဦးလွတ်မြောက်!! တော်ဝင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိ – Myanmar Live
ပြီးခဲ့သည့် ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းခရိုင်ရှိ ပရာဖာခန်ဆိပ်ခံတံတားတွင် ထိုင်းဘုရင်နန်း တက်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်တော်ဝင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအကျဉ်းသား ၅၉ ဦးကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးသည့်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့သည်ဟုသိရသည်
အဆိုပါလွတ်မြောက်လာသူများ သည်အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်အပြုအမူကောင်းမွန်သူများဖြစ်၍လျှော့ပေါ့ပြစ်ဒဏ်ဖြင့်လွတ်မြောက်လာ ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးသယ်ပိုးပေးနိုင်မည့်နိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ်ပြန်လည်ရပ်တည် နိုင်ရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းပေးအပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရသည်
၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်ပြည်လည်နေထိုင်ရာတွင်အဆင်ပြေစေရေးနှင့်လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်ပြန် လည်ဝင်ဆံ့ပေါင်စည်းနိုင်ရေးအတွက် လွတ်မြောက်ခွင့်မပြုမီ ရနောင်းအကျဉ်းထောင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ ပုဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ရေတိုအသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းသင်တန်းများ ပညာပေးသင်တန်းများ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်အကြံပေးချက်များပို့ချပေးခဲ့သည်ဟုသိရသည်
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : www.77kaoded.com , www.ejan.co
TaggedMyanmarmyanmar liveMyanmar live newsMyanmar newsMyanmarliveNewsThailand
၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းများ ပြန်ဖွင့်ပြီ (ဘယ်သူတွေသွားလာနိုင်သလဲ)
ထိုင်းသူခိုးကိုလူကောင်းထင်ပြီးကူညီခဲ့ရာမှ မိမိဆိုင်ကယ်ပါခိုးခံထိသွားတဲ့ “ရွှေမြန်မာ”
Previous Article ကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးပွဲတော်!! ရာဇဘိသိက်နန်းတက်ပွဲတော်ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့့်် ထိုင်းအစိုးရမှ နိုင်ငံတ၀ှမ်း ၇ ရက်တာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပ
Next Article မြန်မာ-တရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းတရားဝင်ဖွင့်လှစ်
View all posts by BB →